စပါးမှာခွစှေမျးပွနလေို့ ရီဂူလှနျကို ပွနျချေါဖို့ ရီးရဲလျစဉျးစားပွငျဆငျနေ - Shwe Soccer
တော့တငျဟမျဟော့စပါး အသငျးက ယခွနှရောသမီမှ ချေါယူထားတဲ့ ဘယျနောကျခံလူ ရီဂူလှနျ ကွောငျ့ အတျောလေး ခေါငျးခဲနရေပါတယျ။ ရီဂူလှနျက ပရီးမီးယားလိဂျ မှာခွစှောနတေဲ့နောကျ ရီးရဲလျမကျဒရဈ အသငျးက ပွနျလညျစိတျဝငျစားနပွေီး လာမယျ့ ဆောငျးရာသီမှာ ပွနျလညျချေါယူခှငျ့ကို အသကျသှငျးဖို့ စီစဉျ လာပါတယျ။ ရီးရဲလျမကျဒရဈ အသငျးအနနေဲ့ မာဆယျလို ကိုအဓိက အားထားနပေမေယျ့ မနျဒီက အားကိုးလို့မရနိုငျတာကွောငျ့ ဘယျနောကျခံ ပွသနာကိုဖွရှေငျးဖို့ ရီဂူလှနျကိုပွနျလညျချေါယူဖို့ စီစဉျလာတာဖွဈပါတယျ။
ရီဂူလှနျ ကို တော့တငျဟမျ ထကျအရငျ ဆီဗီလာ အသငျးနဲ့ ယူနိုကျတဒျတို့က ကမျးလှမျးခဲ့တာဖွဈပွီး မနျယူနိုကျတဒျအသငျး အနနေဲ့ ချေါယူဖို့ အနီးစပျဆုံးအနထေားထိ ရောကျရှိခဲ့ပမေယျ့ ရီးရဲလျအသငျး ရဲ့ တောငျးဆိုမှု့ကွောငျ့မနျခကျြစတာကလပျဖကျကပယျခခြဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ရီးရဲလျအသငျးက ယူရို(၃၅)သနျး နဲ့ အပွီးသတျ ရောငျးခလြိုပွီး စာခြုပျမှာ ယူရိူ(၄၂) သနျးနဲ့ ကစားသမားရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြ ရရှိရုံနဲ့ ပွနျလညျချေါယူခှငျ့ရရှိမယျ့ Buy Back Optionကိုထညျ့သှငျးလိုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ယူနိုကျတဒျ အနနေဲ့ အဆိုပါအခကျြက အသငျးကွီးအခငျြးခငျြး ရောငျးခမြှု့မှာ တဈဖကျသတျ ကွော ခံရတယျလို့ ယူဆပွီး နောကျဆုတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
တော့တငျဟမျ အသငျးက တော့ အဆိုပါအခကျြကို လကျခံခဲ့ပွီး ရီဂူလှနျ ကို ချေါယူခဲ့ပမေယျ့ ယခုအခြိနျမှာတော့ အဆိုပါအခကျြက ပွနျလညျဒုက်ခရောကျလာပါတယျ။ ရီးရဲလျအနနေဲ့ ရီဂူလှနျရဲ့ ခွစှေမျးကို ကွိုကျနှဈသကျမှု့ ရှိနပွေီး ရောငျးခဖြို့ ခှငျ့ပွုခဲ့တဲ့ ဇီဒနျး အပျေါ စိတျပကျြလကျြရှိတယျ လို့ AS ကဖျောပွလာပါတယျ။
LONDON, ENGLAND – SEPTEMBER 29: Sergio Reguilon of Tottenham Hotspur during the Carabao Cup fourth round match between Tottenham Hotspur and Chelsea at Tottenham Hotspur Stadium on September 29, 2020 in London, England. Football Stadiums around United Kingdom remain empty due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in fixtures being played behind closed doors. (Photo by Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images)
မာကာ ကလညျး ပီရကျဇျ အနနေဲ့ ဇီဒနျးရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြကွောငျ့ ယူရို(၁၀) သနျးနီးပါး အပိုကုနျကမြှာ ကို စိတျပကျြနပေမေယျ့ ရီဂူလှနျ ရဲ့ စပိနျ လကျရှေးစငျ စီနီယာ ဖွဈသှားတဲ့ အခကျြကွောငျ့လာမယျ့ ဆောငျးရာသီမှာပွနျလညျချေါယူဖို့ကွိုးစားလာပါလိမျ့မယျ။
တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး အသင်းက ယခြနွေရာသမီမှ ခေါ်ယူထားတဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ ရီဂူလွန် ကြောင့် အတော်လေး ခေါင်းခဲနေရပါတယ်။ ရီဂူလွန်က ပရီးမီးယားလိဂ် မှာခြေစွာနေတဲ့နောက် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းက ပြန်လည်စိတ်ဝင်စားနေပြီး လာမယ့် ဆောင်းရာသီမှာ ပြန်လည်ခေါ်ယူခွင့်ကို အသက်သွင်းဖို့ စီစဉ် လာပါတယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းအနေနဲ့ မာဆယ်လို ကိုအဓိက အားထားနေပေမယ့် မန်ဒီက အားကိုးလို့မရနိုင်တာကြောင့် ဘယ်နောက်ခံ ပြသနာကိုဖြေရှင်းဖို့ ရီဂူလွန်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ စီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ရီဂူလွန် ကို တော့တင်ဟမ် ထက်အရင် ဆီဗီလာ အသင်းနဲ့ ယူနိုက်တဒ်တို့က ကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး မန်ယူနိုက်တဒ်အသင်း အနေနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ အနီးစပ်ဆုံးအနေထားထိ ရောက်ရှိခဲ့ပေမယ့် ရီးရဲလ်အသင်း ရဲ့ တောင်းဆိုမှု့ကြောင့်မန်ချက်စတာကလပ်ဖက်ကပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရီးရဲလ်အသင်းက ယူရို(၃၅)သန်း နဲ့ အပြီးသတ် ရောင်းချလိုပြီး စာချုပ်မှာ ယူရိူ(၄၂) သန်းနဲ့ ကစားသမားရဲ့ ခွင့်ပြုချက် ရရှိရုံနဲ့ ပြန်လည်ခေါ်ယူခွင့်ရရှိမယ့် Buy Back Optionကိုထည့်သွင်းလိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တဒ် အနေနဲ့ အဆိုပါအချက်က အသင်းကြီးအချင်းချင်း ရောင်းချမှု့မှာ တစ်ဖက်သတ် ကြော ခံရတယ်လို့ ယူဆပြီး နောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တော့တင်ဟမ် အသင်းက တော့ အဆိုပါအချက်ကို လက်ခံခဲ့ပြီး ရီဂူလွန် ကို ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် ယခုအချိန်မှာတော့ အဆိုပါအချက်က ပြန်လည်ဒုက္ခရောက်လာပါတယ်။ ရီးရဲလ်အနေနဲ့ ရီဂူလွန်ရဲ့ ခြေစွမ်းကို ကြိုက်နှစ်သက်မှု့ ရှိနေပြီး ရောင်းချဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ ဇီဒန်း အပေါ် စိတ်ပျက်လျက်ရှိတယ် လို့ AS ကဖော်ပြလာပါတယ်။
မာကာ ကလည်း ပီရက်ဇ် အနေနဲ့ ဇီဒန်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ယူရို(၁၀) သန်းနီးပါး အပိုကုန်ကျမှာ ကို စိတ်ပျက်နေပေမယ့် ရီဂူလွန် ရဲ့ စပိန် လက်ရွေးစင် စီနီယာ ဖြစ်သွားတဲ့ အချက်ကြောင့်လာမယ့် ဆောင်းရာသီမှာပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။
Previous Article နမော နဲ့ ဘာပေးကိုထိနျးခြုပျဖို့ ယူနိုကျတ‌ဒျ ဘာတှပွေငျဆငျလာနိုငျမလညျး
Next Article ဂြူဗီမှာ အဆငျမပွဖွေဈနတေဲ့ ဒိုငျဘာလာကို ယူနိုကျတကျ စောငျ့ကွညျ့နေ